Lalana masay : Mpanao "course scooter" iray maty
Omaly tokony ho tamin’ny 1 ora mahery no nitranga ity lozam-pifamoivoizana namoizana ain’olona ity teny amin’ny lalana eny amin’ny farihy Masay iny.
Mpitaingina môtô « scooter » iray, nifaninana tamin’ny namany manodidina ny valo, no nifatratra tany amina fiarakodia. Tapatapaka avokoa ny tongony roa sy ny valahiny. Nahitana vaky be koa teo amin’ny lohany.
"Isaky ny antoandro rehefa vitsy fiara mandeha iny no voalaza fa manao fifaninanana amin’ny môtô "scooter"" eo amin’ny lalana manamorona ny farihy Masay ireo andian-jatovo ireo. Ity zava-nitranga ity anefa dia tena tampoka be satria teo am-pandehanana mafy manodidina ny 140 km isan’ora no nisy 3 cv teo aloha. Tafarisika tany ambanin’io fiara io mihitsy ilay tovolahy nitondra ilay môtô », hoy ny voalazan’ny polisy nijery akaiky ity tranga ity.
Taorian’izay dia môtô iray hafa isan’ireo nifaninana ihany koa no nianjera vokatr’ity fianjeran’ny namany ity. "Naratra mafy ihany koa ity tovolahy ity saingy misy atahorana ny ainy hatreto. Na izany aza, voa mafy ihany izy ka nalefa any amin’ny sampana fameloman’aina", hoy kosa ny mpitsabo iray tetsy amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona nandray ireo niharan-doza.
Vetivety dia tonga maro teny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly ireo namana akaiky ity tovolahy namoy ny ainy ity. "Efa mpanao io fifaninanana io tokoa ireo namany ireo. Matetika rehefa tsy misy atao iny ry zalahy no manao izany ary misy vola atao loka mihitsy", hoy ny iray tamin’ireo naman’ity namoy ny ainy ity. Mpivarotra finday eny amin’ny Araben’ny fahaleovantena Analakely ity tovolahy maty ity.